Tadalafil powder hplc≥99% | Yenza i-tadalafil powderfil nge sal AASraw
/Blog/Cialis , tadalafil/Imibuzo ye-6 ukuzibuza ngaphambi kokuba uphando lwe-powder powder
ezaposwa ngomhla 01 / 09 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Cialis, tadalafil.
Kubalulekile ukwenza powder uphando xa ulungele ukufikelela kwi-intanethi okanye ukuthatha ipowder powder.
Nazi iimbuzo ezintandathu. Nceda uqinisekise kunye nawe.
Q1: Yintoni i powder ?
I-Cialis powder iboniswe ukunyanga kwe-erectile disys function. I-Cialis powder yi-phosphodiesterase uhlobo lwe-5 (PDE5) inhibitor. Isebenza ngokuncedisa ukwanda kwegazi kwi-penis ngexesha lokuvuselela ngokwesondo. Oku kukukunceda ukufezekisa nokugcina i-erection.
I-Q2: Indlela yokusebenzisa i-cialis powder ngokubhekiselele kuyo uphando lwe powder powder ?
Sebenzisa i-Cialis njengalathiswa ngugqirha wakho
Thatha i-Cialis powder ngomlomo kunye okanye ngaphandle kokutya.
Ukusetyenziswa njengoko kuyimfuneko: Thatha i-Cialis ubuncinane imizuzu ye-30 ngaphambi kokusebenza ngokwesondo, njengoko ugqirha ugqirha wakho. I-Cialis ingasebenzela ukufikelela kwiiyure ze-36 emva kokuyithatha.
Ukusetyenziswa kwansuku zonke: rhoqo malunga nexesha elifanayo ngosuku ngalunye.
Hlola nodokotela wakho phambi kokutya iidipefruit okanye ukusela i-juice ngexesha lokuthatha i-Cialis powder.
Ukusetyenziswa njengokuba kuyimfuneko: Ukuba ulahlekelwa umthamo we-Cialis powder kwaye usenenjongo yokubandakanyeka kwimisebenzi yesondo, thatha ngokukhawuleza ukuba ukhumbule. Qhubeka uthabatha njengoko ugqirha ugqirha wakho. Ukusetyenziswa kwansuku zonke: Ukuba uphoswa umthamo we-Cialis powder, thatha ngokukhawuleza. Ukuba liphantse ixesha lakho elizayo, weqa umthamo olahlekileyo uze ubuyele kwishedyuli yakho yokuhlala. Musa ukuthatha amanani e-2 kanye kanye.
I-DOSAGE ye powder powder
Ukusetyenziswa Njengokuba Kufuneka
I-dose yokuqala ephakanyisiweyo ye-Cialis powder yokusetyenziswa njengoko kufuneka kwizigulane ezininzi i-10 mg, ithathwa ngaphambi kokusebenza komzimba wesondo.
I dose inganyuswa kwi-20 mg okanye iyancipha ukuya kwi-5 mg, ngokusekelwe kumsebenzi ngamnye nokunyamezela. Isixa esiphezulu se-dosing frequency sisinye ngosuku kwizigulane ezininzi.
I-Cialis powder yokusetyenziswa njengoko kufunekayo iboniswe ukuphucula umsebenzi we-erectile xa kuthelekiswa ne-placebo ukuya kwii-36 iiyure emva kokulandelwa. Ngoko ke, xa ucebisa izigulane ngendlela efanelekileyo yokusetyenziswa kwe-Cialis powder, oku kufuneka kuthathelwe ingqalelo.
Ukusetyenziswa kwansuku zonke
I-dose yokuqala ephakanyisiweyo ye-Cialis powder ngokusetyenziswa kwimihla ngemihla yi-2.5 mg, ithathwa malunga nexesha elifanayo imihla ngemihla, ngaphandle kokuthatha ixesha lokwenza umsebenzi wesondo.
Umthamo we-Cialis powder ukusetyenziswa kwansuku zonke kunganyuswa kwi-5 mg, ngokusekelwe kumsebenzi ngamnye kunye nokunyamezela.
Buza umniki-nkonzo wakho wempilo nayiphi na imibuzo onokuyenza malunga nendlela yokusebenzisa i-Cialis powder.
Q3: Yenza isilumkiso of Cialis engqondweni xa uphando lwe powder powder
Isaziso esibalulekileyo: I-Cialis ayifanele ithathwe nge-nitrate ngenxa yokukwazi ukunciphisa uxinzelelo lwegazi. Ama-nitrate akufanele athathwe ubuncinane kwiiyure ze-48 ngaphambi kokuba i-Cialis isebenzise nabasebenzisi abaninzi be-nitrate abafuna ukukhusela oku kunye ne-PED5.
Q4: entsha powder uphando: indlela yokwenza i-Tadalafil / i-Cialis yamanzi?
Elula njengoko ingafumaneka: Yongeza inani elincinci le-gelantin (knifetip) kumanzi abandayo (25 ml) kunye nokufudumala amanzi ukuya kwi-80 ° C kude kube yonke i-gelantin ichithe. Vumela ukupholisa uze ufudumale kwaye uphululele inani elifunekayo liselo ngaphakathi kwibhotile (akufanele izaliswe). Yongeza yakho. Vala ibhotile uze ugubungele isihogo ngaphandle kwayo.Voila. Yiyo leyo.
Inkcazo: iGelantin yi-emulsifier, i powder ayiyi kutshabalalisa kodwa yenze i-emulsion ngamanzi. I-emulsion iya kuzinza ixesha elide, ukuba nantoni na iyakunqumla ngokukhawuleza, iya kugulisa, ukuxubha ngokukhawuleza phambi kokuba kusetyenziswe impela. Gcina kwindawo yokulala.
I-Q5: Ukusebenza ngokukhawuleza kwePilisi ye-Cialis kunye nexesha elide elila uphando lwe powder powder?
I-Cialis powder iqala ukusebenza ngokukhawuleza kunezinye izidakamizwa ze-ED, ngokuqala kokusebenza kwimimiselo ye30 ngokuqhelekileyo. Isiphakamiso kukuba kuthathe imizuzu yeCialis 30 ngaphambi kokusebenza ngokwesondo, ngelixa, abasebenzisi bayalawulwa ukuba bathathe isigxina se-60 imizuzu ngaphambi kokusebenza ngokwesondo. Ngokuqhelekileyo, imiphumo yeCialis ekupheleni kwe24 kwiiyure ze-36 emva kokuyithatha. Inyaniso yokuba iziphumo zihlala zihlala ixesha elide liye lithengisa kakhulu iCialis, eyayizibiza ngokuthi "ipilisi yeveki." Amadoda amaninzi anjalo angathatha iCialis ngoLwesihlanu ebusuku, kwaye aphinde abe nemiphumo yeCawa ekuseni. Ubuninzi bexesha leziphumo zeCialis livumela ukuba kubekho ukukhawuleza kunye nokucingela ngaphantsi kwexesha lokuyithatha.
I-Q6: Iinkqubo ezimbini zonyango ezitholakalayo neCialis ezibhalwe kuyo uphando lwe powder powder
Ngokungafani namashishini ayo, i-Cialis powder (171596-29-5) ineendlela ezimbini zonyango ezahlukeneyo. Ingathathwa kwisiseko esifanelekileyo, okanye ingathathwa kwinqanaba eliphantsi kwansuku zonke. Kuthatyathwe kwisiseko esifanelekileyo, umyinge oqhelekileyo ngu-10 mg, nangona ufumaneka kwi-20 mg kunye ne-5 mg isilinganiselo xa i-10 mg iphendulwa ingabi yinto efanelekileyo.
Xa kuthathwa njenge-regimen yemihla ngemihla, i-dose ephakanyisiweyo ngu-2.5 mg. I-Daily Cialis yonyango iboniswe ukuba isebenze ekuphuculeni ukusebenza kwe-erectile ngexesha lokunyanga. Nge-regimen yemihla ngemihla, i-Cialis kufuneka ithathwe malunga nexesha elifanayo ngosuku ngalunye lweziphumo ezilungileyo. Ukuba i-2.5 mg ayisebenzi kakuhle njengemizi ngemihla, oogqirha banokuphakamisa ukuba kunyuswe ku-5 mg nsuku zonke.
Ukutya, Utywala kunye neTadalafil (Cialis) powder
Kukho imingcele yokutya kunye neCialis (171596-29-5). Ingathathwa ngokutya okanye ngaphandle. Ukuphela kokulumkela ngokuxuba ukutya kunye neCialis kukuba amadoda kufuneka aphephe ukusela i-juice ye-grapefruit ne-Cialis. Ukuthatha i-Cialis kunye nejusi yamagilebhisi kunokunyusa amanqanaba egazi lonyango, kwaye ngelixa le nto ingaba ngathi yinto entle, amazinga aphezulu egazi aphakamisa umonakalo wemiphumo emibi engathandekiyo.
Ngenxa yokuba i-Cialis inokunciphisa uxinzelelo lwegazi, ukudibanisa notywala kunokunyusa umphumo. Ukuthatha i-Cialis notywala kunokunyusa umngcipheko wesisu, ukukhanya okukhawulezileyo, ukuthatha intliziyo, kunye nentloko. Sebenzisa ulumkiso xa usela kotywala ngelixa uthatha i-Cialis, ngakumbi ukuba awuqinisekanga ukuba kuya kukuchaphazela njani. Ngokukodwa, ukunyuka ukusuka kwindawo ehleliyo okanye elalayo kwenza kube lula ukuba ufumane ukukhanya okulula kunye noxinzelelo.
Ngaphambi kokuthenga okanye ukuthatha i-Tadalafil (Cialis) powder, ukuba kukho nayiphi na into engathandabuzekiyo, nceda uqaphele ingqalelo kwiwebhsayithi malunga neminye imibuzo malunga nophando lwe-powder aasraw
tags: powder, tadalafil powder
Yintoni eyenziwa nguTadalafil?
I-Tadalafil ipowder for sale: Indlela yokukhetha umthengisi we-tadalafil? I-raw tadalafil powder vs Raw sildenafil citrate powder